Ifektri Yezimoto - Abakhiqizi Bezimoto BaseChina, Abahlinzeki
GPS Tracker / Imoto / GT-V01
Le suti yemodeli ye-smart car tracker yezimoto ezine-interface ye-OBD, iyindlela yokuqapha yezimungulu yezimoto. Isebenzisa i-GPS ne-AGPS isikhundla sobuchwepheshe obuphindiwe, isikhathi sangempela sinikeza indawo enembile futhi esheshayo. Ukufakwa kwamahhala, faka isikhombimsebenzisi se-OBD semoto, asikho isidingo sokulimaza ulayini wemoto wokuqala. Ixwayisa ngenkathi iphuma endaweni yokubeka geo-uthango.
Ngenye indlela, le modeli inezinsizakalo ezithile, i-alamu esheshayo, i-alamu yamandla aphansi, i-alamu yokuhamba, ukungena / ukuphuma kwe-alamu ye-Geo-fence, i-alamu yokudlidliza, i-alamu yokulwa nokudilizwa, i-alamu yokulwa nokushayisana, gcina amandla nezindleko ze-GPRS, Ukubeka ukugunyazwa okungu-5 izinombolo zocingo. Ungumsizi omuhle wokunakekela izimoto.
GPS Tracker / Imoto / GT-V02
Le modeli smart GPS tracker yenzelwe ikakhulukazi izimoto, imoto, isithuthuthu, isithuthuthu sikagesi, i-ebike, isithuthuthu, ibhalansi yemoto njll. Isebenza ngokuya ngesikhundla se-tech GPS + i-AGPS, ngokushesha okukhulu futhi ngokunembile ngesikhathi sangempela thola isikhundla, anti- ukweba. Inomsebenzi wokusetha i-geo-fence, izokwazisa ngenkathi iphuma endaweni yokubeka.
Futhi le modeli inezinzuzo ezithile, i-alamu esheshayo, i-alamu yamandla aphansi, i-alamu yokuhamba, ukungena / ukuvala i-alamu ye-Geo-fence, i-alamu yokudlidliza, i-alamu yokulwa nokudilizwa, i-alamu yokulwa nokushayisana, ukonga amandla nezindleko ze-GPRS. Futhi eminye imisebenzi ongayikhetha, ukusika i-alamu yamandla, ukutholwa kwe-ACC nokwazisa, uwoyela wesilawuli kude kanye nesekethe, misa imoto.
Le modeli ye-smart GPS tracker ikakhulukazi yezimoto ezine-interface ye-OBD, isekelwa yi-GPS + AGPS position tech, ingashesha kakhulu futhi itholakale ngqo isikhundla emhlabeni jikelele. Inomsebenzi wokusetha i-geo-fence, izokwazisa ngenkathi iphuma endaweni yokubeka. Umsizi omkhulu wokunakekela izimoto.
Futhi le modeli inezinzuzo ezithile, i-alamu esheshayo, i-alamu yokuhamba, ukungena / ukuvala i-alamu ye-Geo-fence, i-alamu yokudlidliza, i-alamu yokulwa nokudilizwa, i-alamu yokulwa nokushayisana, gcina amandla nezindleko ze-GPRS.
GPS Tracker / Imoto / GT-V04
Le modeli smart GPS tracker ikakhulukazi yezimoto ezine-interface ye-OBD, yeloli, ibhasi, imoto, isithuthuthu. isekelwa yi-GPS + AGPS position tech, ingashesha kakhulu futhi ibeke kahle isikhundla emhlabeni jikelele. Inomsebenzi wokusetha i-geo-fence, izokwazisa ngenkathi iphuma endaweni yokubeka. Umsizi omkhulu wokunakekela izimoto.
Futhi le modeli inezinzuzo ezithile, i-alamu esheshayo, i-alamu yokuhamba, ukungena / ukuvala i-alamu ye-Geo-fence, i-alamu yokudlidliza, i-alamu yokulwa nokudilizwa, i-alamu yokulwa nokushayisana, izindleko zokonga namandla we-GPRS, Ukubeka inombolo yokugunyazwa engu-5. Futhi eminye imisebenzi ongayikhetha, ukutholwa kwe-ACC nokwazisa, ukusika i-alamu yamandla, uwoyela wesilawuli kude kanye nesekethe, ukuthola ukusetshenziswa kukaphethiloli, izinga lokuthola amandla kanye ne-voltage （ozikhethela i-PIN engu-5), ukuthola i-air conditioner ivuliwe noma icishiwe. Umsizi omkhulu wokugcina imoto.
Khulisa i-Lightin, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Isitshalo sikhule ukukhanya, Ukukhanya kwesitshalo, Khulisa ukukhanya,